Tattoo fudud, oo lagu sawiray laba daqiiqo! | Tattoo
Tattoo fudud, oo lagu sawiray laba daqiiqo!
Nat Cerezo | | Noocyada Tattoo-ka
Waxaa jira waqtiyo aannaan dareemayn sida naqshad xad dhaaf ah iyo baroque ah, oo leh kun midab iyo hoos oo ay nolosha ku qaadanayso dhammaystirkeeda. Waa halkaan halka ay xaraashka fudud.
ka xaraashka Fudud ayaa lagu kala saaraa iyadoo la leeyahay naqshado aad u fudud, oo lagu sawiray laba daqiiqo. Badanaa waa jajabyo yaryar oo si weyn ugu eegi kara faahfaahin qoto dheer oo gees gees ah.
1 Naqshadaha ugu fudud
2 Cabirka noocan oo kale ah
3 Immisa ayey ku kacayaan tattoosyadan?
Naqshadaha ugu fudud
Si loo doorto naqshad loogu talagalay tatoo kasta oo fudud waxaad leedahay fursado badan oo kala duwan. Laga soo bilaabo tirooyinka joomatari ee fudud (xabadaha, saddexagalka, laba jibbaarada, wadnaha ...), adigoo dhex maraya astaamaha (sida caadiga ah kumbuyuutarka, emoticons ...) illaa sawiro yar yar (haramka, dhakada, qorraxda, dayaxa, xiddigaha ...).
Sidoo kale, Tattoo fudud ayaa waliba taageera naqshadaha fudud ee ka kooban dhowr "sawirro", tusaale ahaan, xiddigle, xarfaha ...
Cabirka noocan oo kale ah
In kastoo jaleecada hore sawirka yar ee fudud ee loo yaqaan 'tattoos' ay umuuqdaan inay dhamaantood aad u yaraan doonaan, runta ayaa ah in noocan oo kale ah sawirada sawirka sidoo kale waxaan ka heli karnaa qaabab kala duwan. Tusaale ahaan, Naqshad aad u fudud ayaa ah fallaadho, oo durba cabirkoodu sarreeyo, iyo sidoo kale masaska, qoraalada muusikada iyo xitaa kan skyline ee magaalo.
Immisa ayey ku kacayaan tattoosyadan?
Hore ayaan uga hadalnay mowduuca munaasabadaha kale, in kastoo ay mudan tahay in la xusuusto: Tattoo, si kasta oo ay u yar yihiin oo ay fududahay, badiyaa waxay leeyihiin qiime ugu yar. Qiimahan sida muuqata waxaa ka mid ah, marka lagu daro waqtiga uu farshaxanyahu ku jiro, taxane ah qiimeyaal go'an sida feeraha, diyaarinta nashqadda ...
Sidaa darteed, ha u arkin wax la yaab leh haddii farshaxankaaga tattoo uu ku weydiisto adiga Qiimo isku mid ah oo loogu talagalay tattoo-ga yar sida kan weyn.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay maqaalkan ku saabsan tattoos fudud, aad ayey u yar yihiin way qurux badan yihiin, sax? Noo sheeg, ma leedahay tattoo lamid ah? Sidee ahayd khibradaadu? Xusuusnow inaad noogu sheegto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoo fudud, oo lagu sawiray laba daqiiqo!
Tattoo-yada yar-yar ee ragga
Tattoo dahab ah, si aad uga faraxsanaato magpie